Sekuyisikhathi eside ukubhebhetheka komzimba kuvuselela ingqondo yomuntu wesimanje. Isibonelo, ufuna ukudla umkhiqizo wakho ozithandayo, kodwa awukwazi, ukuphendula okweqile kuvele ngokushesha . Kwabanye, kungokungapheliyo ekamelweni elithulile, ukukhipha nokukhalaza kuqale. Kodwa lezi akuzona zonke izizathu ezingabangela izifo. Ngezinye izikhathi kunzima ngisho nokuqonda ukuthi yini eyabangela ukuthuthukiswa kwesenzo sokugula.
Uma umuntu omdala esevele ejwayele ukuveza ukubonakaliswa kwegazi, abantwana abancane abanesifo sofuzo bahlupheka kakhulu kunoma yikuphi ukubonakala kwawo. Eminyakeni yokuqala yokuphila kwengane, abazali abaningi babhekene ne-atopic dermatitis (i-diathesis), lapho umzimba wonke wengane ugcwele ukugqunywa, ukushaywa, ukuvuvukala nokushisa ngokweqile kwesikhumba. I-Rhinitis, futhi lena enye uhlobo lokungezwani komzimba, kuyisicashulo se-mucosa esiswini. Ngokuvamile lokhu kubonakaliswa ukuqina, ukucinwa kwamanzi kanye nokukhipha umphuzi ekhaleni (ukucasula kubonakala). Izinhlobo ezimbi kunazo zonke zokungezwani komzimba ziyi-conjunctivitis kanye nesifo se-asthma esine-bronchial. Kungakhathaliseki ukuthi yikuphi ukungezwani, kufanele kutholakale ngokushesha. Okokuqala udinga ukuqeda i-allergen: uma ukungezwani komzimba kubangele umkhiqizo, ngakho-ke kufanele kukhishwe ekudleni kwengane, uma ukushaywa kwengane okunjalo kuhlotshaniswa nothuli, kuyadingeka ukuhlanza igumbi ngisho nokugeza izingubo.
Ukwelashwa kokungenwa kwemithwalo kwengane enganeni ngeke kuphumelele ngaphandle kokuthi usebenzise imithi ekhethekile ebizwa ngokuthi i-antihistamine ekudambiseni imithi. Sekuyiminyaka manje odokotela bebelokhu bezama ukuthola ikhambi elihle elizobhekana ngokuphumelelayo nangempumelelo nanoma yikuphi ukubonakaliswa kokuphendula okwenziwe izingane. Kumele kuqashelwe ukuthi cishe wonke ama-antihistamine anemiphumela emibi eminingi. Ngaphezu kwalokho, azikwazi ukuthathwa isikhathi eside: ngaphezu kokuthuthukiswa kokulutha, isimo somntwana jikelele singase sibi kakhulu: ukulala, ukudla nokunye okuningi kuzovela.
Iningi lwakamuva, umuthi omusha uvele emashalofini ama-pharmacy - iZirtek izingane. Kungenzeka ngokushesha ukuthi kubhekwe ohlwini lwezidakamizwa ezingathembeki nezingenakusebenza, uma kungenjalo ngesifundo esisodwa. Ekuhlolweni, izingane ezingaphezu kwezingamakhulu amathathu zeminyaka ehlukene zahlanganyela. Bonke babenemibonakaliso ye-allergen, njenge-conjunctivitis, i- atopic dermatitis, isifuba, njll. Kakade ezinsukwini zokuqala zokwelapha, eziningi zezifundo zazizwa zingcono kakhulu. Ngenyanga engu-80 amaphesenti wezingane azizwa kahle. Ngakho-ke, lolu cwaningo lubonise ukuthi uZirtek izingane ayilona umlutha, awunayo imiphumela emibi kakhulu, futhi usebenza kahle kakhulu nazo zonke izinhlobo ze-allergies. Ngokusho kwe-IMS Healt, iZirtek yezingane ngokuvamile ihlelwe odokotela base-US ukuphatha ukwelashwa kweziguli zabo.
Kumele uqaphele ukuthi ungasebenzisa lesi sidakamizwa ukwelapha ukwelashwa komntwana kuphela ngemvume yodokotela oya khona kanye kuphela namanani okuzobekwa wona. Awufuni ukudumisa, kodwa mayelana ne-zirtek zezingane, ukubuyekezwa kuningi labo kulungile kuphela. Lokhu-ke, akunakwenzeka kodwa ujabule, ngoba kubuhlungu kakhulu ukubheka ingane engeyona ilanga lokuqala elibhekene ne-allergies.
I-Zirtek yezingane ingasetshenziswa kusukela ezinyangeni ezingu-6 ubudala. Futhi lokhu kuyinto enkulu kakhulu, ngoba amanye ama-antihistamine amaningi awavunyelwe ukuba asetshenziswe ezinganeni ezincane ezinjalo. Indlela yokulungiselela ibuye ilula. Njengoba kungathandeki kakhulu ukunikeza amaphilisi ezinganeni ezincane, kungcono ukuthenga umuthi emaconsi.
Ithuluzi leZirtek yezingane liqukethe lonke ulwazi oluwusizo mayelana nomuthi. Noma kunjalo, kufanele isetshenziswe njengesingeniso, futhi kungenjalo kufanele usebenzise idatha yokuzitholela ingane. Amanani akhethwe ngokungalungile angalimaza isimo, futhi nge-allergies lokhu akuthandi kakhulu.
Ukubonisana kwabazali beqembu lokulungiselela: izihloko kanye
Izincomo kanye namathiphu ekufundiseni ingane ukubhala kahle
Yokuzijwayeza Universal Callanetics. Amazwana kanye nemibono
Yini Okufanele Ngiyenze Uma Umyeni Ushiye Ngenye?
Amalungelo nemisebenzi abazali
Yemoto kulandzelana nekuhlunga tinsita. Incazelo, ukusebenza isimiso
Udweba kanjani Rapunzel - emuva inganekwane
Ubani Contra Bludsikera? Incazelo enemininingwane yomdlali indlela yokulwa ke